Cawayska Washington, 04 June 2019
Talaado 4 June 2019
Ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington. Toddobaadkan waxa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamed Shirwac.
Dhageyso Bar. Caweyska Washington
Ku soo dhawaada Barnaamijka Caweyska Washington. C/xakiim Maxamuud Shirwac ayaa soo jeedinaya.
Kusoo dhawaada qeyb kale oo ka mid ah barnaamijka Caweyska Washington. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdixakim Maxmuud Shirwac.